pyin oo lwin Archives - LODGGY
June 19, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	Myanmar, Pyin Oo Lwin
ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်ကြီးသည် ပြင်ဦးလွင်ရဲ့အထင်ကရတွေထဲက ပြယုဂ်တစ်ခုပါ။ – ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်ကြီးကို Purcell Tower လို့ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ နာရီစင်ကြီးဘယ်လိုဘယ်ပုံစတင်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ ကျွန်တော်တို့ ခုနှစ်အချို့ကိုသိထားရပါမယ်။ -နာရီစင်မှ နာရီကြီးဟာ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Gillete & Johnson Company မှဗြိတိသျှ ပဉ္စမမြောက် ဂျော့ဘုရင်​၏ နန်းစံသက် ၂၅နှစ်မြောက် ငွေရတုသဘင် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခဲ့သော နာရီအနည်းအငယ်မှ တစ်လုံးအဖြစ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့မှ Mr.Purcell နှင့် ပြင်ဦးလွင်မှ ရှေ့နေကြီး Mr.M.Azin တို့​၏ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် နာရီကြီးက ပြင်ဦးမှရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ -၁၉၃၅ခုနှစ်မှာတော့ နာရီစင်ကြီးကို ရန်ကုန်မှ ဆောက်လုပ်ရေး Company Clark & Graig Co. မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါသည်။ -၁၉၃၆ …
Read the full post →“သင်မသိသေးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကနာရီစင်ကြီးအကြောင်း”
lodggy, myanmar, pyin oo lwinLeaveaComment on သင်မသိသေးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ကနာရီစင်ကြီးအကြောင်း
Kandawgyi Hill Resort Review
April 3, 2017 Aung Toe	English, Hotel Reviews, Pyin Oo Lwin
For this week review, we will be looking at Kandawgyi Hill Resort located at the summer town of Myanmar, Pyin Oo Lwin. It will only take you justamere 10 min walking to the gardens. This is best choice for the guests who want to be stay close to the gardens.
hotel review, kandawgyi hill resort, may myo, pyin oo lwinLeaveaComment on Kandawgyi Hill Resort Review
17 Restaurants to try in Pyin Oo Lwin
March 26, 2017 Aung Toe	English, Pyin Oo Lwin, Recommendation
You are in the summer city, Pyin Oo Lwin and not sure where to eat? Here is our comprehensive guide to the best restaurants in town!
aung padamya, barista khine, cafe, Club Terrace, coffee, December Strawberry Farm, feel lake front, golden star tea house, htee hlaing, Maung Nan Kham, maw da nu, may myo, pan taw win, pyin oo lwin, restaurants, taj indian, the viewLeaveaComment on 17 Restaurants to try in Pyin Oo Lwin
7 Hotels to Consider for Your Next Visit to Pyin Oo Lwin
March 22, 2017 Aung Toe	English, Mandalay Division, Recommendation
Whether you are still thinking of going or already planning your trip to Pyin Oo lwin, here are our recommendations of hotels in Pyin Oo Lwin in different budget category.
Aureum Resort, Governor’s House, hotel pyin oo lwin, hotel rich, may myo, motel 99, pyin oo lwin, shwe nan htike hotel, Shwe San Eain, swimming poolLeaveaComment on7Hotels to Consider for Your Next Visit to Pyin Oo Lwin